Izindaba - I-expo China 2020 e-SHANGHAI
I-expo China 2020 eShanghai
IE expo China 2020 eShanghai
Njengombukiso wezemvelo wase-Asia, i-IE expo China 2020 inikela ngeplatifomu elisebenzayo lebhizinisi kanye nezokuxhumana labasebenzi baseChina nabakwamanye amazwe emkhakheni wezemvelo futhi lihambisana nohlelo lwenkomfa yezobuchwepheshe nolwesayensi olusezingeni lokuqala. Kuyipulatifomu efanelekile yochwepheshe embonini yezemvelo ukuthuthukisa ibhizinisi, umbono wokushintshana nenethiwekhi.
Ngokuhambisana nesidingo esikhuphukile semakethe nokwesekwa okukhulu embonini yezemvelo evela kuhulumeni waseChina, amandla ebhizinisi embonini yezemvelo eChina makhulu. Akungabazeki ukuthi i-IE expo China 2020 iyinto "okumele" kubadlali bezemvelo ukuthi bashintshisane ngemibono futhi bathuthukise ibhizinisi labo e-Asia.
I-China igxile kakhulu kunanini ngaphambili ekuvikelweni kwemvelo nesimo sezulu. I-IE expo China 2019, eyenzeke ngo-Ephreli 15 kuya ku-17 eShanghai New International Expo Center (SNIEC), ikhombise lokhu ngokusobala. Phakathi nezinsuku ezintathu zomcimbi, izivakashi ezingama-73,097 zohwebo ezivela emazweni nezifunda ezingama-58 zabamba ukuthambekela nobuchwepheshe obusha emkhakheni wezobuchwepheshe bezemvelo e-Asia. I-IE expo China nayo ibone ukwanda kwababonisi nendawo yaphansi: Ababonisi abangu-2,047 bamele endaweni yombukiso yamamitha-skwele ayi-150,000 (amahholo embukiso ayi-13 esewonke).
I-IE expo China 2020 izokwenzeka kusuka ngo-13-15 Agasti eShanghai New International Expo Center (SNIEC) eShanghai, ezohlanganisa zonke izimakethe ezinamandla kakhulu endaweni yezemvelo:
Ukwelashwa Kwamanzi Nendle
Ukulawulwa Kokungcoliswa Komoya Nokuhlanzwa Komoya